Akhriso Axkaamta iyo Waajibaadka Soonka Iyo Fadligiisa - BAARGAAL.NET
Baro Diinta Ramadaan xulka
Akhriso Axkaamta iyo Waajibaadka Soonka Iyo Fadligiisa
✔ Admin on May 16, 2017 0 Comment
Waxaa wanaagsan oo muhiim ah marka hore inaan ogaano soonka fadliga uu leeyahay si bacdamaa aan ugu baratano faa'idadiisa qaaliga ah oo sanadkii mar na soo marta.
Xadiis ku jira saxiixul Bukhaariga iyo Muslim oo uu soo weriyay Abuu-Hurayra A.K.R (Allaha ka raali noqda'e) wuxuu yiri: "Camal kasta oo bani aadamku la yimaado oo camal san ah waa loo lalaabayaa, halkii wanaagna toban laab ayaa looga dhigaa ilaa toddaba boqol oo laab, Allaah kor ahaaye wuxuu yiri: "Soonka mooyaane, soonka anigaa iska
leh, anigaana ka abaal marinaya, wuxuu qofka soomaani ka tagay hawadiisii iyo cuntadiisii aniga dartay" qofka soomani laba jeer ayuu farxaa; (marka uu afurayo iyo marka uu rabbigii la kulmayo).
Urka afkiisa ayaana Alle agtiisa ka udgoon carafta Miskiga".
Waxaa la soo dejiyey bisha Ramadaan Qur'aanka kariimka
Marka waxyaalaha aan kor ku soo sheegnay oo dhan waa nicmatullah uu Alle u gaar yeelay inta rumeysay si ay uga faa'idaystaan khayraadkaasi faraha badan ee bisha Ramadaan.
Waxay waajib noqonaysaa in soomo Ramadaanka marka la arko bisha Ramadaan ama ay Shacbaan ku dhammaato soddon.
Waxaana waajib ah in lagu soomo aragtida hal qof oo muslim ah oo aanan wax fiqsi iyo been lagu aqoon, laakiin bilaha kale lama aqbalayo wax ka yar laba qof oo
Muslimiin ah oo wanaagooda la yaqaano. Lagumana afurayo wax ka yar argtida bisha ay arkaan laba qof oo Muslimiin caaddiliin ah ama in bisha soddoonkeesa buuxsamo.
Qofkasta oo Muslim ah waxaa ku waajiba inuu soomo sannad kasta bisha Ramadaan oo noqota 29-30 maalmood sida Qur'aanka iyo sunnada ku xusan.
Qofkii beeniya faral ahaanta soonka, Islmaaka ayuu kaga baxayaa.
Qofkii afura maalin soon isago haysan cudur daar caqli gal ah, waa danbiile weyn. Haddii la seego soomidda bisha Ramadaan cudurdaar
la'aan caqli gal ah awgi, ama qofku dayaco inuu soomo waa ku faral inuu gadaal ka gudo, markii uu awoodi karo, inuu dhakhso iska gudo
baana door roon.
1. Waxaa waajib ku ah qofka sooman inuu ka tago xanta iyo beenta, xantana waxaa la yiraahdaa in aad qof walaalkaa ah ama walaashaa ah aad ka sheegto wax uu dhibsanayo haba ahaato tilmaantaa.
2. Namiimnimada oo ah warka loo kala qaado dadka dhexdiisa oo dabadeedna ay dadkii is dhexmaraan ama ay dhalato fidno iyo fasaad
4. Cayda waa inuu iska ilaaliyo oo aanu afkiisa ka oran eray xun noocuu doono ha noqdee isla markaana uusa dhageysan, indhihiisa waa inuusa xaaraan ku fiirin, carrabkiisana uu ka dhowro inuu ku hadlo wax xaaraan ah, sida beenta ama hadal been ah oo la abuurto. Rasuulkii
Allena isgoo ka hadlaya arrimahan soo sheegnay wuxuu yiri. ("Qofkii aan iska dayneyn, beenta iyo ku dhaqankeeda Ilaahay dan kama laha inuu qofkaasi ka tago cuntadiisa iyo cabbiddiisa").
2. Galmada yacni adiggoo afadaada jaamacdo maalinnimo nooc kasta ha ahaatee, sidoo kale waa la mid ah manida (shahwada) qofka sooman soo jeed kaga timaado. Laakiinse waxba kuma jabna inuu nin la fadhiisto afadiisa, dhunkado waayo tani aalaaba ma keento shahwo laakiinse
haddii uusan qofku hanan karin naftiisa inuu ka dheeraado (afadiisa) inta maalinnimada ah.
4. haweenka haddii uu ka yimaado dhiig caado ama mid dhalmo
5.Ismatajin kas ah, haddiise aan la iska keenin soonku kuma burayo
6. ka bixidda diinta Islaamka (riddoobid), Allaa ka magan galne'e
Haddii uu qofku nidar ku galo inuu soomo amaba ay tahay inuu soomo kafaaro gud ahaan dambiyo ka dhacay oo soomid loo waajibeyey, qofkaa waxaa saaran inuu soomo maalmaha cayiman ee waajibka ah inuu soomo,haddii aysan maalmahaa cayinayn, inuu dhakso iska gudo baa dhowrsanaan badan
Soonka sunnada aha ay soonto haweeney idan la'aan ninkeeda isagoo jooga
soonka isku bixis maalmaha loo soomo iyadoon la afurayn, oo aan kala goa'lahayn oo loo yaqaan (Wisaal).
Shuruudaha aasaasiga ah oo la doonayo in lahelo la'aantoodana soonku
qofku waajib ku ahayn
Inaad tahay daahir (haweenka) waa inay ka yihiin daahir caadada
(xaydka) iyo (Nifaaska) dhiiga la yimaada dhalmada
Inaad niyaysato habeennimada soonka maalinta xigta, niyadduna waainaan lagu dhawaaqin, maxaalkeeduna (booskeeda) waa qalbiga. Qofka walibana gaarkii buu u niyaysan haddiina uusan qofku horay uniyaysan
xittaa haddii uu markaa ka af qabsado oo uu ka joogo dhammaan waxa ka reebban qofka sooman, soonkiisu ma ansaxayo Waa inaad tahay qaan gaar; Soonka lagama rabo ilmo aan baaluqin Inaad garowsantahay faral ahaanta soonka.
Nebigu (s.c.w) aad buu ugu dadaali jiray suxuurta oo ahmiyad gaar ah
ayuu siin jirey, wuxuuna yiri: ("Suxuurta cunisteedu waa barako ee ha ka tegina kabbo biyo ahna ahaatee, sababtoo ah Ilaahay iyo Malaa'igtiisuba waxay xusaan oo u duceeyaan kuwa suxuurta").
Haddaba suxuurashadu waa sunno Nebiga ka sugnaatay, waxaana kala saara soonka Muslimiinta iyo soonka Yahuudda iyo Nasaarada, Muslimiinta way
suxuurtaan marka ay soomayaan, halka aysan Yahuudda iyo Nasaarada ka suxuuran. Xittaa haddii uusan qofka Muslimka ahi baahi u qabin cunto waa inuu ugu yaraan qaataa dhowr kabbo oo caano ama biyo ah.
Anas a.k.r. wuxuu yiri: (Nabigu s.c.w. wuxuu ku afuri jirey dhowr xabbo oo timir busur ah intuusan salaadda maqrib u soo bixin, haddii uu waayana wuxuu ku afuri jirey timirta kale, haddii uu waayana wuxuu ku afuri jirey xoogaa biyo ah.) [Waxaa weriyey At-Titmidi iyo Abuu
Wuxuu sidoo kale Nabigu ku dhiiriyey asxaabtiisa inay isla sidaa u afuraa. Timirta guud ahaan waxaa aad looga helaa Jasiirada Carabta.
biyahana sidoo kale waa wax meel walba laga helo, gunta arrintaasina waxay ahayd inaysan dadku dhib kala kulmin furidda soonkooda oo ay ku afuraan waxyaalaha guud ee la heli kar. Dhinaca kale timirtu waxay qofka u kabtaa wixii jirkiisa siin karay tamar iyo xoog. Biyuhana ma
aha wax guud oo keliya ee la heli karo ee waa daahir wax daahiriya.
Biyuhu waxay nadiifiyaan jirka debedda iyo gudahaba. Markii uu qofka soomani ku afuro soonkiisa biyo qabow oo nadiif ah haraad maalin dhan ah, waxaa hubanti ah inuu dareemi doono farxad iyo raynrayn iyo abaal
uu u hayo Alle kor ahaaye.
Sidaa oy tahay, ma aha inuu qofku naftiisa tahlukeeyo oo dhibaateeyo isagoo taqwo u suubanaan u jeeda ee waa inuu ku afuraa waxyaalaha kale. Waxaa jira wardiyo iyo ducooyin lala yimaado waqtiga afurka ama dabadi. Wardiga aad la iman afurka kaddib: (Dahabad- dama'u wabtallatil curuuqu wathabal ajru inshaa Allaah). Oo la macne ah (Waan
oon baxay oo xididadii qoyeen oo haddii Alle idmo ajarku waa sugan
Inaad siiso cunto, cabbitaan uu ku afuro qof soomman waxaa ku jira ajar weyn oo waa sunno nalagu booriyay. Waxay barako u tahay qofka wax afurinaya iyo kan la afurinayaba xittaa haddii uu ku sadaqaysto afuriyaha dhowr luqmadood ama hal timir ah ama labo, Nabigu s.c.w.
wuxuu yiri: (Qofkii afuriya qof sooman wuxuu leeyahay ajarkiisoo kale,iyadoon qofkii soommanaa ajarkiisa waxba laga nusqaaminayn).
Da' iyo tabar darro daran inay ku heyso gaarsiisan heerka lagu rukhsadeeyo afurka.
Xaamiladda iyo nuujisadu hadday u baqaan ilmaha ay nuujinayaan ama kan caloosha ku jira way u bannaan tahay inay afuraan, wayna qallaynayaan
soonkii, waxaana ugu wanaagsan inay qalleeyaan sida ugu dhaqsi badan ee ay karaan, waxayna bixinayaan oo qallahooda raacinayaan quudin miskiin intii ay afureen (ama siin qadar in dhan kiilo iyo bar oo bariis ama galley ah, ama mesego, iwm, miskiin maalintii, sidaa awgeed haddii ay afureen bishii oo dhan waxay bixinayaan jawaan bariis ah,
ama wax la mid ah oo 45 kiilo ah iyagoon qalleynayana soonkii).
Laakiin haddii ay naftooda u baqaan way afurayaan kaddibna waxay qallaynayaan soonka markay awoodaan sida ugu dhakhso badan, quudinna lagama rabo.
Qofka da'da ahi ee aan karin soonka wuxuu quudinayaa maalin walba oo soon ah. qof waxaa isna sidaas oo kale ah kan jirran oo qaba cudur aan laa rajo qabin ka bogashadiisa.
Qofka waa loo oggolyahay inuu Soonka jebiyo haddii uu la kulmo gaajo,
haraad daran oo ka baqo in wadiddiisa dhib ka imaanayso.
Faa'iidooyinka ssonka waxaa kamid ah qofka inuu ka barto sabar, iyo inuu taqwo ka korarsado Waxay kaga faa'iidaysan karaan walaalaheen Muslimiinta ah ee sigaarka iyo qaadka ku ibtileysan iska daynta waxyaalaha xun, ayna ogaadaan in
Alle dartiis qofkii uga taga shay xaaraam ah in Alle ugu beddelo wax ka qayr badan Waxaa kaloo uu leeyahay soonku faa'iidooyin bulsheed oo ah inay dareemaan midnimo iyo inay jeclaadaan caddaaladda iyo sinnaanta Waxaa kaloo soonku leeyahay faa'iidoooyin caafimaad ah sida inuu
daahiriyo caloosha iyo xiidmayaasha iyo jirkaba, wuxuu ka fududeeya qofka culayska cayilka, baruurta
Waxaa kaloo ka mid ah faa'idooyinka soonka qofka qaniga ah wuxuu ogaanayaa qaddarka Nimcada Rabbi siiyey oo aanay haysan qaar badan oo fuqaro ah.
Isha maqaalka aflax.net